Có tốt không, nên mua ở đâu ? | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Có tốt không, nên mua ở đâu ? | Muasalebang in Muasalebang
Muva nje, I-Yukibudo yasolwandle ingelinye lamagama angukhiye aseshwa kakhulu kwi-internet kodwa abantu abaningi abalwazi lolu hlobo lokudla. Eqinisweni, ukhula lwasolwandle lwamagilebhisi lufana nemifino kodwa luqukethe i-fiber eningi, amavithamini nezinye izithako ezibalulekile, ikakhulukazi izithako ze-Omega 3 kanye ne-Fucoidan.
Ngakho-ke yiziphi izinzuzo ezilethwa ukhula lwasolwandle lwe-Yukibudo empilweni, ubani okufanele adle ukhula lwasolwandle lwamagilebhisi nokuthi angaludla kanjani okungcono kakhulu? Ake sithole impendulo ngokuqukethwe okulandelayo.
1 Kuyini ukhula lwasolwandle lwamagilebhisi?
2 Funda nge-Yukibudo Seaweed
2.1 Ulwazi lomkhiqizo
2.2 Ivelaphi i-Yukibudo grape seaweed?
2.3 Yiziphi izinto ezivelele ze-Yukibudo grape seaweed?
3 Izithako zokudla okunomsoco ku-Yukibudo grape seaweed
3.1 Izithako Fucoidan
3.2 Izithako Omega 3
4 Ingabe i-Yukibudo yamagilebhisi yasolwandle kulula ukuyidla?
5 Ubani isitsha samagilebhisi sokhula lwasolwandle esilungele?
5.1 Imikhiqizo yokhula lwasolwandle i-Yukibudo iphephe kakhulu
5.2 Khomba abasebenzisi bomkhiqizo
5.2.2 Odla imifino
5.2.4 Abantu abadala
6 Ungayisebenzisa kanjani i-Yukibudo grape seaweed?
6.1 Cwilisa emanzini ahlanzekile
6.2 Gcoba emanzini eqhwa
6.3 Ukucubungula ukhula lwasolwandle lwamagilebhisi
7 Izinzuzo zezempilo ze-Yukibudo grape seaweed
7.1 Thuthukisa impilo, ukwesekwa kwe-pathology
7.1.1 Siza ukuqinisa amathambo
7.1.2 Ukusekelwa kombono
7.1.3 Kuzuzisa inhliziyo nomfutho wegazi
7.1.4 Vimbela i-goiter
7.2 Isiza ukusekela inqubo yobuhle
7.3 Iwusizo kumama nengane
Kuyini ukhula lwasolwandle lwamagilebhisi?
I-grape seaweed iwukhula lwasolwandle oludliwayo olufana nemifino yansuku zonke. Ngenxa yokuma okufana nezixha zamagilebhisi ezincane ngokulandelana, lolu lwelwe lubizwa ngokuthi amagilebhisi olwandle. Ukhula lwasolwandle lwamagilebhisi lukhula luningi emanzini aseNingizimu-mpumalanga ye-Asia kanye naseziqhingini ezisePacific Ocean.
Ezweni lakithi, lolu hlobo lwezimila zasolwandle lwatholakala cishe ngo-2006 esiqhingini sasePhu Quy. Kodwa-ke, imakethe yasekhaya yazi okuningi kuphela ngemikhiqizo yezimila zasolwandle eminyakeni emi-2 edlule lapho itshalwe kabanzi ekulimeni eNha Trang, eKhanh Hoa. Lena indawo enesimo sezulu, izinga lokushisa kanye namanzi ahlanzekile afaneleka kakhulu ukukhulisa le “vegetable” yomsoco ophezulu.
Funda nge-Yukibudo Seaweed
Igama lomkhiqizo: Amagilebhisi olwandle Yukibudo
Ukupakisha: Ibhokisi lamaphakethe angama-06 angama-25g
Umkhiqizi: I-Vietnam – Japan Joint Stock Company Organic Food
Ukusetshenziswa: isengezo sokudla okunempilo, ukunakekelwa kwezempilo kanye nobuhle
Ivelaphi i-Yukibudo grape seaweed?
Umkhiqizo i-yukibudo seaweed kutshalwe futhi kukhiqizwe emakethe yasekhaya yinkampani yakwaLevuce. Imboni yokucubungula nokupakisha umkhiqizo yiViet Nhat Organic Food Factory. Ngokufanelekile, umkhiqizo ngamunye uzibophezele ekukhiqizeni ngaphansi kwenqubo evaliwe, elawulwa ngokuqinile ngokuvumelana nezindinganiso zaseJapane ukuze kuqinisekiswe ikhwalithi engcono kakhulu lapho ufinyelela abathengi.
Yiziphi izinto ezivelele ze-Yukibudo grape seaweed?
I-Yukibudo seaweed ingabhekwa njengemifino okufanele uyidle ekudleni kwansuku zonke. Kodwa isici esikhethekile sale mifino ukuthi “imifino ye-premium” enenani eliphezulu lokudla okunomsoco. Ukudla izitshalo zasolwandle zamagilebhisi njalo akusizi nje kuphela ukuletha izitsha ezintsha, ukushintsha ama-flavour kuwo wonke umndeni, kuyindlela yokunakekela impilo, ukwengeza izakhi kanye nokusekela ngokuphumelelayo inqubo yobuhle yabesifazane.
Xem Thêm [Review] Phấn nước Ohui Hàn Quốc tốt không? Giá bao nhiêu? | Muasalebang
Ukuqinisekisa ukuphepha kanye nekhwalithi yabasebenzisi, umkhiqizo ulawulwa ngokucophelela kusukela ekukhuleni kuya ekukhethweni nasekupakisheni ukwelashwa.
Izithako zokudla okunomsoco ku-Yukibudo grape seaweed
Umkhiqizo I-Yukibudo yasolwandle ayinikezi amandla amaningi kodwa inenani eliphezulu lokudla okunempilo. Ngenxa yalokhu, abasebenzisi bangakwazi ukwengeza ngokuphelele imisoco nsuku zonke ngaphandle kokwesaba ukuzuza isisindo.
Ngokuqondile, amandla afinyelela kuphela amagremu angu-4.4 kumagremu angu-100 wezimila zasolwandle, ezinye ezinye izithako ezizuzisayo ezifana nalezi: Ama-carbohydrate, i-fiber, amaprotheni, i-calcium, uvithamini C, vitamin A, Iodine futhi insimbi. Ikakhulukazi, okuqukethwe kwe-calcium equkethwe ezitshalweni zasolwandle zamagilebhisi kuphezulu kakhulu, cishe u-16% futhi ngaphezu kwalokho, kukhona i-Fucoidan ne-DHA, i-EPA.
I-Fucoidan iyisithako esibalulekile ku-Yukibudo seaweed esebenza ukukhulisa ukumelana nokuvimbela umdlavuza ngempumelelo. Ikakhulukazi, ukubekezelela okujwayelekile kwenani lansuku zonke le-Fucoidan nakho kuyasiza kakhulu kubantu abanesifo senhliziyo nemithambo yegazi, i-atherosclerosis, nomfutho wegazi ophakeme. Izakhamzimba nazo zinamandla okusekela ukuqiniswa komsebenzi wesibindi, ukusiza asebekhulile ukuba babe nempilo futhi bazinzile.
Izithako Omega 3
Ukhula lwasolwandle lwamagilebhisi luqukethe inani elikhulu le-Omega 3, ikakhulukazi ama-acids ama-2 e-DHA kanye ne-EPA, abalulekile emzimbeni womuntu. Yebo, kuyo yonke iminyaka, i-Omega 3 inikeza izinzuzo eziningi ezibalulekile njengokukhula kobuchopho bezingane, isiza ukuthuthukisa ukubona, izuzisa izinzwa, isekela ukukhulelwa okunempilo, ivimbela ukuntuleka kwegazi emzimbeni.igazi nezinye izinto eziningi ezisetshenziselwa impilo.
Ingabe i-Yukibudo yamagilebhisi yasolwandle kulula ukuyidla?
Amagilebhisi olwandle Yukibudo “imifino” elinganiselwe kulula ngempela ukudla futhi mhlawumbe Umlutha uma kuphakelwa nayo i-sesame ethosiwe. Uma ilungiswe kahle ngokwemiyalo, ukhula lwasolwandle lwamagilebhisi alunakho ukunambitheka kwenhlanzi okunzima ukukudla kodwa lunezici zokunambitheka okunosawoti okusebenziseka kalula, kanye nokwengezwa kwephunga elimnandi lemvelo lokhula lwasolwandle.
Uma uyidla, umbono wokuqala umuzwa wokuququda nokuhlafuna. Ikakhulukazi, ukunambitheka okunosawoti kokhula lwasolwandle akwenzi abantu bome, ngoba kucishe kunyamalale ngemva kokuba ukhula lwasolwandle lwamagilebhisi lugwinywe. I-aftertaste eyinhloko ngalesi sikhathi akuwona umuzwa onosawoti emphinjeni, kodwa ngokuphambene nalokho, ukunambitheka okumnandi okumnandi kakhulu futhi kuvusa ama-taste buds. Ngemva kokudla ucezu olulodwa, ngifuna ukudla olunye ucezu, lapho ngidla kakhulu, ngithanda kakhulu ngaphandle kokwesaba ukukhuluphala noma ukugayeka kokudla.
Ubani isitsha samagilebhisi sokhula lwasolwandle esilungele?
Imikhiqizo yokhula lwasolwandle i-Yukibudo iphephe kakhulu
Njengoba kushiwo, kusukela ekulimeni kuya ekupakisheni imikhiqizo eqediwe, i-Yukibudo yamagilebhisi yohlobo lwaseJapan ilawulwa ngaphansi kwenqubo evaliwe eqinile, ngakho iphephe kakhulu kubasebenzisi. Ikakhulukazi, ngenxa yobuchwepheshe bokuhlukaniswa kwamanzi, umkhiqizo unesikhathi eside sokuphila, ugcina i-brittleness yemvelo isikhathi eside, futhi ufanelekile kubathengi abaningi abahlukene kusukela kwasebekhulile kuya ezinganeni ezincane.
Khomba abasebenzisi bomkhiqizo
Izitshalo zasolwandle zamagilebhisi ziwukudla okulungile futhi cishe wonke umuntu angasebenzisa ukhula lwasolwandle lwamagilebhisi njengokudla ukwengeza umsoco wansuku zonke womzimba. Kwesokudla:
Izitshalo zasolwandle zamagilebhisi zifanelekile ukwengeza umsoco kubantu asebekhulile lapho amandla okumunca umsoco encipha futhi ewusizo kakhulu ekuvimbeleni izifo eziyingozi ezihlobene nomfutho wegazi, inhliziyo kanye nemizwa.
Kubantu abadla imifino, ukudla amagilebhisi asolwandle kuzokwengeza imisoco eminingi enenzuzo ukulinganisela umsoco nsuku zonke.
Ikakhulukazi, abesifazane abakhulelwe bayizifundo ezifanele kakhulu zokusebenzisa ukhula lwasolwandle lwamagilebhisi nsuku zonke ukwengeza amavithamini engeziwe kanye nezakhi ezibalulekile zokuvikela ukuntuleka kwe-anemia kanye ne-calcium. Ngesamba esikhulu samafutha acid anenzuzo, ukhula lwasolwandle lwamagilebhisi luwusizo kakhulu ebuchosheni nasekukhuleni ngokomzimba kwezingane ezincane ukuze zibe namandla futhi zihlakaniphe ngokushesha zisuka esibelethweni.
Abantu abadala nabo badinga ukudla izimila zasolwandle ukuze balethe izinzuzo ezinkulu zezempilo. Kwabesifazane, i-Yukibudo yasolwandle ayiyona nje isidlo esimnandi, kodwa futhi ihambisana nobuhle, isiza ukugcina isikhumba sibushelelezi, sibushelelezi futhi sivimbele ukuguga kangcono.
Ngaphezu kwalokho, ukhula lwasolwandle lwamagilebhisi luwukudla okuhle kakhulu okuphakanyisiwe kubantu abasesigabeni sokudla. Kunjalo, ukhula lwasolwandle lwamagilebhisi luqukethe amandla amancane kanye nenani elikhulu le-fibre olwandle lwamagilebhisi kanye nezinye izithako ezisebenza kahle kakhulu ohlelweni lokunciphisa i-cholesterol, ukusekela ukulahlekelwa kwamafutha, nokukhipha ubuthi ngokushesha.Ukuncipha kwesisindo kuba okuphephile futhi kusebenza kahle. Ukuphakamisa abesifazane abangemva kokubeletha ukuthi badle izitshalo zasolwandle zamagilebhisi njalo akusizi nje kuphela izinzuzo zobisi kodwa futhi kubuye kubuyiselwe isimo ngokushesha.
Ungayisebenzisa kanjani i-Yukibudo grape seaweed?
Nakuba isitsha se-yukibudo seaweed sinempilo futhi kulula ukuyisebenzisa, kufanele kuqashelwe ukuthi izingane ezingaphansi kwezinyanga ezingu-6 ubudala noma abantu abanezimpawu zokungezwani komzimba kunoma yisiphi isithako olwandle akufanele bakusebenzise lokhu kudla. Ngaphezu kwalokho, ukuze kuqinisekiswe ubumnandi, kuyadingeka ukwenza ukucubungula kokuqala ngaphambi kokudla ngokuya ngezinyathelo ezilandelayo ngokulandelana:
Cwilisa emanzini ahlanzekile
Amagilebhisi olwandle Yukibudo kusetshenzwe ubuchwepheshe bokuhlukanisa amanzi ukuze kube lula ngesikhathi sokuthutha kanye nokusiza inqubo yokulondoloza isikhathi eside. Ngakho-ke, ngaphambi kokudla, abasebenzisi badinga ukucwilisa izitshalo zasolwandle zamagilebhisi emanzini cishe imizuzu emi-4 ukuze bandise ngokulinganayo futhi banciphise usawoti wemvelo.
Ngemuva kwemizuzu emi-4, gudluza ukhula lwasolwandle lwamagilebhisi bese ushintsha amanzi acwiliswe cishe izikhathi ezi-4 kuze kube yilapho ukunambitheka okunosawoti kwasolwandle kudliwa futhi ukhula lwasolwandle lunombala oluhlaza oheha iso. Ukugeza nokushintsha amanzi izikhathi eziningi nakho kusiza ekususeni ukunambitheka okunezinhlanzi kolwelwe ngokuphumelelayo.
Gcoba emanzini eqhwa
Izitshalo zasolwandle zamagilebhisi, ngemva kokucwiliswa kanye nokugeza ngamanzi ahlanzekile, zidinga ukuthululwa kubhasikidi, bese ulungisa isitsha seqhwa elichotshoziwe bese uqhubeka nokwengeza ukhula lwasolwandle lwamagilebhisi, bese uxuba kahle ukuze uvumele ukhula lwasolwandle ukuba lubambe amakhaza. Emazingeni okushisa aphansi, ukhula lwasolwandle lwamagilebhisi lucishe luqede ngokuphelele ukunambitheka kwenhlanzi okungokwemvelo futhi lube crispy futhi lube mnandi.
Ukucubungula ukhula lwasolwandle lwamagilebhisi
Ngemuva kokuthi ukucwiliswa kweqhwa sekuqediwe, kunconywa ukuthi ubeke ukhula lwasolwandle lwamagilebhisi futhi kubhasikidi ukuze lukhiphe futhi lungadliwa ngokuqondile, luphakwe nge-sesame sauce (ethengiswa nomkhiqizo) noma igaywe ibe yimifino evamile exutshwe ukuze uyijabulele. Qaphela ukuthi i-yukibudo seaweed kufanele isetshenziswe kungakapheli imizuzu engama-30 ngemuva kokucutshungulwa ukuze ivinjwe ukuthi ingabomi futhi inciphise ubusha bayo ngemva kwalokho.
Xem Thêm [Review] Mỹ phẩm Skinfood tốt không? Top 5 sản phẩm tốt nhất | Muasalebang
Ngaphezu kwalokho, inani lokudla okunomsoco wezitshalo zasolwandle zamagilebhisi liphezulu kakhulu, ngakho-ke kufanele kuqashelwe ukuthi zonke izinsuku akufanele zidle ngaphezu kwamagremu angu-10 ukuqinisekisa ukuphepha kwezempilo kanye nokungamoshi. Futhi izingane ezingaphansi kwezinyanga eziyisi-6 akufanele zisebenzise ukhula lwasolwandle lwamagilebhisi.
Izinzuzo zezempilo ze-Yukibudo grape seaweed
Thuthukisa impilo, ukwesekwa kwe-pathology
Siza ukuqinisa amathambo
Inani elikhulu le-calcium ezitshalweni zasolwandle zamagilebhisi lisiza ukuqinisa amathambo, ukuvimbela ukukhumuzeka kwamathambo kanye nezinkinga zobuhlungu obuhlangene obuhlobene nobudala. Ezinganeni ezincane, ukudla izimila zasolwandle zamagilebhisi nakho kusekela inqubo yokukhula ngokomzimba, kusiza izingane ukuba zikhulise ukuphakama namandla azo.
Ngomsoco obalulekile we-Omega 3, ukudla izimila zasolwandle kunomthelela wokusekela ukubona, kusiza ukugwema amehlo omile, ukungaboni ebusuku nezinye izinkinga eziningi zamehlo.
Kuzuzisa inhliziyo nomfutho wegazi
Iningi labantu asebekhulile linezifo ezihlobene nomfutho wegazi, isifo sikashukela nesifo senhliziyo. Lezi yizifo ezisengozini enkulu yokushaywa unhlangothi futhi zingaholela kalula ezinkingeni eziyingozi. Khonamanjalo, imisoco etholakala ezitshalweni zasolwandle iYukibudo kuthiwa inamandla okuxhasa impilo yesiguli, isiza ukuthi lesi sifo sizinze isikhathi eside ukuze isiguli siphile impilo ejabulisayo nenempilo. Ikakhulukazi, ukhula lwasolwandle lwamagilebhisi luwusizo futhi ekunciphiseni ingozi yomdlavuza, ikakhulukazi umdlavuza wesisu.
Ngokuqukethwe kwe-iodine ezithanjeni, ukudla amagilebhisi asolwandle kuvimbela ngempumelelo i-goiter kokubili izingane kanye nabantu abadala. Ngaphezu kwalokho, okuqukethwe kwe-fiber ephezulu ku-Yukibudo grape seaweed nakho kunomphumela we-laxative, ukuvimbela ukuqunjelwa futhi kunenzuzo ohlelweni lokugaya ukudla.
Isiza ukusekela inqubo yobuhle
Ukhula lwamagilebhisi luwukudla okuzuzisa kakhulu kokubili isikhumba nezinwele ukusiza abesifazane bathuthukise ubuhle babo kusukela ngaphakathi nangaphandle, ngokuqhubekayo nangempumelelo. Kunjalo, ukudla amagilebhisi asolwandle njalo kukusiza ukuba ube nezinwele eziqinile nesikhumba esiqinile, esithambile.
Kwabanye abantu, ukudla amagilebhisi asolwandle kuyazuzisa kakhulu inqubo yokuqeda ubuthi, ukunciphisa i-cholesterol egazini nokusekela inqubo yokulahlekelwa isisindo elula futhi ephumelelayo. Kuyasiza futhi ekugcineni isibalo, ukusiza abesifazane bagcine ukubukeka kwabo kobusha isikhathi eside.
Ngaphezu kwalokho, ukhula lwasolwandle lwamagilebhisi lungasetshenziswa futhi oluchotshoziwe ukwenza imaski yokunakekelwa kwesikhumba ehlukene uma ihlanganiswe nobisi olusha noma uju. Imaski yamagilebhisi yasolwandle isiza isikhumba ukuthi sithuthukise ukunwebeka, sicwebezele, sibushelelezi futhi sibe mhlophe.
Iwusizo kumama nengane
I-Yukibudo yamagilebhisi yasolwandle iletha imisoco eminingi enenzuzo kakhulu empilweni yabesifazane abakhulelwe ngesikhathi sokukhulelwa ukusiza bobabili umama nengane babe nempilo futhi bengeze ngokugcwele izithako ezibalulekile zenqubo yokuthuthukiswa. Ngokuvamile, inani elikhulu lamaprotheni, i-calcium, i-DHA, i-EPA, i-ALA kanye nefayibha kokubili kusiza ukuthuthukiswa kobuchopho bombungu futhi kusize abesifazane abakhulelwe bagweme ukuphelelwa igazi kwegazi nokuqunjelwa ngesikhathi sokukhulelwa ngempumelelo.
Lokhu kungase kuthiwe kuyisixazululo esiphelele kwabesifazane abakhulelwe ukunikeza imisoco yomzimba kodwa balawule isisindo sabo kahle ngoba ukhula lwasolwandle lwamagilebhisi luqukethe amandla aphansi kakhulu, alwenzi abesifazane abakhulelwe bakhuluphale. Ikakhulukazi, ukudla izimila zasolwandle zamagilebhisi ngemva kokubeletha kuphinde kusekele inqubo yokutakula ngokuphumelelayo, kusiza omama ukuba basheshe babuyisele isimo sabo, isikhumba futhi babe nobisi olwengeziwe ukuze banakekele izingane zabo.
Ngakho, I-Yukibudo yasolwandle Kuwukudla okunempilo okufanele bonke ubudala. Ngaphezu kwalokho, ukhula lwasolwandle lwamagilebhisi lungasetshenziswa ukwenza imaski ukondla isikhumba ngezinye izithako ezifana noju, i-aloe vera, iyogathi, njll.
Ukuqinisekisa ikhwalithi yokhula lwasolwandle lwamagilebhisi, isikhathi ngasinye kufanele ucwilise kuphela inani elidingekayo futhi kungcono ukushiya umkhiqizo endaweni epholile, eyomile, kude nokukhanya okuqondile.
(Kuvakashelwe izikhathi ezingama-273, ukuvakashelwa okungu-2 namuhla)